musha nyika dzakabatana WWE Superstars AJ Styles Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeWWE Superstar inonyanya kuzivikanwa nezita remadunhurirwa “Unoshamisa" uye mazita chaiwo "Allen Neal Jones".
Yedu AJ Styles Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweNorth Carolina akazvarwa nyanzvi yewrestler kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanonyanya kugona maswiti epasirese. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga AJ Styles 'Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
AJ Styles Yevacheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure.
WWE Nyeredzi, AJ Zvitaera, (akabhabhatidzwa Allen Neal Jones) akaberekwa musi we 2nd waJune 1977 paMarine Corps Base Camp muLejeune, North Carolina, United States.
Akaberekwa naamai vasinganyatsozivikanwi nezvavo uye kuna baba vaishanda mungarava.
Vechidiki Styles 'mhuri yakatamira kuGainesville muCarolina paakanga aine gore rimwe chete. Yaiva paGainesville kuti Masitaera akakurira muhurombo nehama dzake nhatu.
Mhuri yake yakaita imba yavo mutrailer park uye yakanga isina TV kana chero svikiro revaraidzo.
AJ Styles akarererwa mupaki yetrailer.
Kuzvitora zvese, baba vaStyles 'vaive chidhakwa vane dambudziko rekunwa rakawana mukana mukushungurudza mukurwisa.
“Paainwa aive baba vanotyisa. Akatora kure kure zvishoma zvishoma dzimwe nguva, achiuya kumba achitsvaga kurwa, uye akaiburitsa pavana vake uye dzimwe nguva mukadzi wake.
Pane dzimwe nguva dzakaoma. Kunyange zvinhu zvakaipa zvakadaro zvakaitika, ndaingoziva kuti baba vangu vaindida. ” Zviratidziro zvitaera paDombo Cold WWE's Network Podcast.
Kunyangwe zvakadaro, Styles 'baba vakahwina mashoma mapoinzi mukuva mubereki nekunyoresa mwanakomana wavo kuchikoro uye kuona kuti aipinda mumitambo.
AJ Styles Dzidzo:
Masitayera kumashure mamiriro ezvidzidzo anosanganisira zvidzidzo zvake paJohnson High School kuGainesville, Georgia.
Ndichiri kuchikoro, Masitaera akatamba basketball, baseball uye akatanga kutamba nhabvu kubva kubanga rake rechisere.
Akafurirwa neshamwari dzake kuti apinde mukurwira, mutambo iye zvishoma nezvishoma akatanga zvido mukati uye akazove akagona kwazvo.
Nekuda kweizvozvo, iye akapihwa chikamu chekukwikwidza kudzidza kuPhysical Education kuAnderson University muSouth Carolina.
Nekudaro, Masitayera haana kupedzisa zvidzidzo zvake kukoreji paakasiya kuti anyorese pachikoro chehunyanzvi chekurwa.
Paaive aripo, masitayera akagumisira nekutora isinganzwisisike mabasa sekutyaira, kucheka uswa nekupa mvura.
Masitayera akatora mabasa akaderera anosanganisira kutyaira paunenge uchidzidzira kuve nyanzvi yekurwa.
AJ Styles Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Yekutanga kumira paStyle ekutanga basa rekufamba rwendo kwaive kuNational Championship Wrestling NCW kukwidziridzwa, kwaakaita debut yake muna 1998 mushure mekudzidziswa neane mukurumbira Rick Michaels.
Kunyangwe Masitayera akarasikirwa nemutambo wake wekutanga naMichael Brooks, akagadzira fomu inonakidza yakamuona achikunda kukwidziridzwa kweTerevhizheni Championship.
Akazoita mutsimba pazivandudzwa zvishoma-zvinozivikanwa asati aenda kuNWA Wildside kwaakatora zita rezita rekuti "AJ Styles".
AJ Styles kuNWA Wildside mugore ra2000.
AJ Styles Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kwakazotevera kwekutanga basa rekuyedza vakaona Masitayera rekodhi kuoneka kwekusimudzira seWorld Championship Wrestling (WCW), Total Nonstop Action (TNA) ikozvino Impact Wrestling.
Zvimwe zvinosanganisira; World Wrestling Federation (WWF) ikozvino WWE, World Championship Wrestling (WCW), World Wrestling All-Nyeredzi (WWA), Frontier Wrestling Alliance (FWA), Independent Wrestling Association Mid-South (IWA), uye Ring of Honor (ROH).
Zvaakaita pakushambadzirwa zvinosanganisira kukunda NWA World Heavyweight Championship katatu, TNA World Heavyweight Championship kaviri pakati pezvimwe zviitiko zvakawanda.
AJ Styles akakunda yake yekutanga TNA World Heavyweight Championship muna 2009.
AJ Styles Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau:
2016 raive gore iro maStyles akabatana neWWE uye akaita re-debut yake muna Ndira gore iroro. Nezve-re-debut, isu tinoreva masitayera aive asiri mutorwa kuWWE.
Muchokwadi, akange aita kuwoneka katatu kweWWE pakati pe2001-2002 uye akapihwa chibvumirano chebudiriro chaakaramba.
Masitayera akaramba chibvumirano nekuti zvaireva kutamira kuCincinnati muOhio, danho raizokanganisa zvirongwa zvemukadzi wake kukoreji.
Pakati paNdira kusvika Nyamavhuvhu 2016, Masitaera akange akundikana kupfura paRoyal Rumble zita, akatanga gakava naChris Jericho uye akanyoreswa kuSmackDown brand uko kwaakakunda Ambrose kuti ave WWE World Champion uye anofarira fan.
Akadzivirira zita rake kakati wandei ndokuenda kunotora mukwikwidzi weUnited States nekukunda Owens muna Chivabvu 2017. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
AJ Styles dzakakunda United States Championship kekutanga musi wa7 Chikunguru 2017.
About Wendy Jones - AJ Styles 'Wife:
AJ Styles murume akaroora. Tinokuunzira ruzivo rwechokwadi nezvehukama hwake hwekare kusanganisira maonero aakaita nekusaroora mukadzi wake, Wendy Jones.
Kutanga, hapana marekodhi ehukama hwekare hweMitambo sezvo iye aingova nemusikana wake akazova mukadzi, Wendy.
Wendy ndiye chete mukadzi AJ Styles anga aine makumi emakore.
Ivo vaviri vakatanga kusangana panguva yavo yekudzidza paJohnson High Chikoro kuGainesville, Georgia ndokutanga kufambidzana nezuva reValentine mukati megore ravo repamusoro pachikoro chepamusoro mu1996.
Vakaramba vari vaviri vasingaparadzanisike uye vakaroora 4 makore akazotevera pa5th yaNyamavhuvhu 2000.
AJ Styles akaroora mukadzi wake Wendy musi wa5 Nyamavhuvhu 2000.
Kubatana kwavo kunokomborerwa nevanakomana vatatu Ajay Covell Jones (akazvarwa muna May 3 2005) Avery Jones (akaberekwa munaFebruary 14th 2007), Albey Jones (akazvarwa muna September 15th 2009) uye musikana wavo oga Anney Jones akaberekwa Gumiguru 8th 2014.
AJ Styles 'mukadzi Wendy nevana vavo vana.
Mafashoni anonyanya kuda mudzimai wake anoshanda semudzidzisi wechikoro. Muchiedza chakafanana, ane hukama hwepedyo nevana vake vane mazuva ekuberekwa ari mazita akarembera kurutivi rworudyi rwemuviri wake pasi pematangiro AJ
AJ Styles Hupenyu Hwemhuri:
Nyeredzi yeWWE yakaberekerwa mumhuri yakaderera ye6 tinokuunzira ruzivo rwechokwadi pamusoro penhengo dzemhuri yake.
Nezve AJ Styles 'Baba:
Panguva yekuzvarwa kwaAJ Styles, baba vake vaive mufambisi wezvikepe vaigara naamai veStyles nevanun'una vake panhandare yemauto muCamp Lejeune, North Carolina.
Nekudaro, vakatama kubva pachigadziko kuenda kuGainesville, Georgia apo Styles aingova negore rimwe chete.
Nekuda kweizvozvo, Masitayera haayeuke chero chinhu nezve hupenyu hwepasi asi akambotaura kuti "kamwe chete mugungwa, gara uri mugungwa".
Paive mushure mekutama kwavo kubva pachigadziko ndipo baba vaStyles vakava chidhakwa chinoshusha "uyo aigona kubvarura mumwe munhu chero nguva paanouya kumba akadhakwa".
AJ Masitayera baba vaive vafambisi vengarava vakachinja doro.
Nezve AJ Styles 'Amai:
Masitayera ane amai vakanamatira nemhuri kuburikidza neyakaonda uye yakatetepa kusanganisira kurara nababa vaSita vane chidhakwa pamubhedha wakapetwa mumba yekutandarira.
Akaita sarudzo kuitira kuti ave nechokwadi chekuti Masitayera nehama dzake nhatu vanogona kurara mukati mekamuri iri nani yepaki yetrailer yavaigara.
Nezve AJ Styles 'Vanun'una:
Masitaera ane vakoma vatatu vasingazivikanwe zvakanyanya uye vasina hanzvadzi. Nekuda kweizvozvo, chinzvimbo chake mumhuri hachigone kutsanangurwa.
Kunyange zvakadaro, zvinofungidzirwa kuti kambani yavo yakabatsira kuumba hudiki hwake uye ndokumupa iro rinodikanwa dhiraivha kuti abudirire.
AJ Styles Hupenyu hweMunhu:
Chii chaunoziva iwe pamusoro peMastaira kupfuura ake e-mhete anoedza?. Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kwehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake.
Kutanga, Zvitaera murume anochinjika uye anobuda anosanganiswa nyore nemafeni uye shamwari. Kudivi repafiripi, anogona kunge asina kuita sarudzo uye dzimwe nguva anokurumidza.
Iko hakuna kumbobvira paita nguva isingafadzi neAJ Styles.
Kubva pamatauriro ake, Michina ndiyo inonzi 'Mutambo wemavhidhiyo.' Zvaanoda zvinosanganisira NCAA 13 Football, Street Fighter uye Super Mario Bros. Anofarirawo mune motokari, nhabvu uye basketball.
AJ Styles Mararamiro:
Nemitengo inofungidzirwa yemadhora mazana matanhatu emadhora, masitayera anorarama hupenyu hune mwero nemukadzi wake nevana kumba kwavo kuGainesville, Georgia. Haapiwe kune anoshamisira showoffs sevamwe vake muMMA uye tsiva.
Nekudaro, iyo wrestler mota inokodzera mumigwagwa uye mabhasikoro anotenderera mukumubatsira kurova mugwagwa wezvekurwa kwake.
AJ Styles 'ine Kia Optima mumotokari yake muunganidzwa. Credits: Dodoodad.
AJ Styles Chokwadi:
Muna 2011, Masitaera akaonekwa pavhidhiyo yaSarah Darling, "Chinhu Chekuita Nemaoko Ako".
AJ Styles yakaverengerwa mumhanzi waSara Darling mu2011.
Mifananidzo yeAJ yakava yekutanga TNA Grand Slam Champion nekukunda TNA Legends / Television Championship.
MunaNovember 2017, Masitaera akakunda WWE Champion Jinder Mahal panguva yeSmackDown Live chiitiko kuManchester, England.
Neye feat, Styles akave wekutanga mutsimba kuhwina iyo WWE World Championship Chita kunze kweNorth America. Akabatawo zita remazuva mazana matatu nemakumi matatu nemanomwe rinova rakarebesa munhoroondo yeSmackDown.
Masitayipi akarwira kukwidziridzwa kwepasirese, kusanganisira New Japan Pro-Wrestling kwaakazoita kaviri IWGP Heavyweight Champion.
AJ Styles akakunda yake yekutanga IWGP Heavyweight zita panguva yekurwa kweNew Japan Pro-Wrestling kusimudzira.
Munguva yehondo dzake dzakawanda paTNA, Styles yakaratidzwa kuva vanoita zvepabonde nekuda kwemashoko akawanda aionekwa seanovhiringidza gay community.
Muna 2009, akaonekwa semudzidzisi wewrestling paMTV vechidiki 'kuzvivandudza kwechokwadi nhepfenyuro yeterevhizheni, "Yakagadzirwa" (mwaka wegumi, chikamu 10).
Mifananidzo ndeye muKristu akazvipira anoisa Mwari pakutanga Mhuri. Saizvozvowo, anoda muchechi wechiKristu hip hop kupfuura chero mhando ipi zvayo uye anozvirumbidza pamusoro pekugona kwake kuchikoro chero mupi wenhau pamusangano wechiKristu hip hop mumhanzi.
AJ Styles inoisa Mwari pamberi pemhuri.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu AJ Styles Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi.
Yakanyanya Inodzidzisa Kutenda